[OFFICIAL] DataKit iPhone Data Cleaner - Gbanyụọ iPhone Data ma Wepu Nzuzo
iOS Sistem Iweghachite
Ndabere iOS Data & Weghachi
Nyefee na iPhone
Iweghachite Data Weghaara
Ndabere data Android & Weghachi
Sisọp Mgbasa ozi gam akporo
Nyefee gam akporo
Iweghachite data Windows
Mac Data Iweghachite
Ihe nyocha ihuenyo
Gbanye Nyefee Mobile
Iweghachite Data Data iPhone
Iweghachite gam akporo
Jikwaa data ekwentị
Ngwá ọrụ PC
Ngwanrọ eweghachite data
Zụta maka Mac Zụta maka Win
Free Up iOS ngwaọrụ na One Pịa.
Kpochapụ data niile - Wepu Junk faịlụ na nwa oge iji bulie ngwaọrụ iOS.
Can nwere ike Choosehọrọ Datadị data You Chọrọ Gbanyụọ.
Kpochapu ozi nkeonwe iji chebe gi.
Mpikota onu foto nke na akwadokwa ozokwa.
Nweta ya Ugbu a Imeri Download Mac Download Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
Tinye Adreesị Email gị, Anyị ga-ezitere gị njikọ nbudata nke ngwaahịa anyị.
Note: Ngwaahịa anyị dị naanị na Windows na Mac OS.
[kọntaktị-ụdị-7 id = "3427" aha = "Nbudata arịrịọ"]
Kpochapụ data nkeonwe iji chebe Onwe gị
Anyị na-echekwa ozi ụlọ akụ anyị, akaụntụ nnabata, ozi ịntanetị, kọntaktị na ọbụna mbipụta mkpịsị aka na iPhone. Mgbe ịchọrọ ịtụfu ya ma ọ bụ resị ya ndị ọzọ, ị ga - ewepụrịrị ihe niile site na nrụpụta nrụpụta iPhone gị, ebe enwere ngwaọrụ mgbake nke atọ, enwere ike weghachite data ahụ, nke doro anya ga - ewetara gị nsogbu. Yabụ, ị ga-agba mbọ hụ na enweghị ike weghachite ndị ahụ i wepụrụ. Iji mee nke ahụ, ịkwesịrị iPhone Data Cleaner iji kpochapụ oghere ekwentị, kpochapụ nchekwa ma kpochapụ data niile na ekwentị gị. Ma na inwere onwe gị n’aka ndi omekome nwere ike ị nweta ozi nkeonwe gị.
Hichapụ ihe niile dị na iPhone
Can nwere ike ihichapụ ma wepu data niile dị na iPhone gị gụnyere kọntaktị, ozi, akụkọ ihe mere eme, ndetu, foto, kalenda, ncheta, akwụkwọ nchekwa safari na ndị ọzọ. Otu Pịa ma gị iPhone ga-alaghachi ụbọchị mgbe ị itopusi igbe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ụfọdụ ụdị data, ị nwere ike ịhọrọ ha ka ihichapu ma debe ndị nke ọzọ na iPhone.
Cache ọcha ma mee ka iPhone / iPad gị dị elu
Faịlị junk, faịlụ nwa oge, ihe nchekwa ngwa (onyonyo, ozi ndekọ), ihe nchekwa weebụ, kuki na data ndị ọzọ ga - ewe ebe buru ibu na ebe nchekwa iPhone / iPad gị n'ime oge ga - egbutu gị iPhone / iPad. Jiri iPhone Data Cleaner, ị nwere ike:
Kpochapụ cach All App, cach weebụsaịtị, kuki jiri otu pịa.
Hichapụ faịlụ buru ibu, faịlụ junk na sistemu eji emepụta.
Mee ngwa ngwa iPhone / iPad gị ma mee ka ngwaọrụ gị rụọ ọrụ ọsọ ọsọ.
Mpikota onu foto Mma Losslessly
Ọ ga-abụrịrị foto na-ewe nchekwa kachasị na iPhone anyị kachasị mkpa maka ndị na-amasị foto iPhone. Ichekwa ohere maka iji ọzọ, ịkwesiri ịnyefe foto site na iPhone / iPad na Kọmputa ebe ị nwere ike ịbanye na ha na-akwụghị ụgwọ. Na iPhone Data Cleaner, ị nwere ike:
Mbupụ Foto na Kọmputa maka ichekwa nchekwa ma ọ bụ ndabere.
Mpikota onu foto na-enweghị na iPhone ịhapụ ohere ọzọ na Ngwaọrụ iOS.
Kachasị mma nke iPhone na Windows na Mac
Ihichapu data na iPhone, iPad ugbu a!
Imeri Download Mac Download
Ihe nhicha data iPhone na-ewepụ data nzuzo na iPhone, iPad, na iPod ma mee ka data ndị ahụ ghara idobe ya site na iji eriri na-enweghị isi dochie data.
Ọ bụrụ na iPhone gị ezughi oke nchekwa, ọ na-ada iji nweta nkwalite iOS n'ihi oghere dị ala ma ọ bụ naanị ịjụọ oyi mgbe ị na - eji ya, ị nwere ike iji ngwa a wepu ohere.
Ọ bụ ihe nhicha data iPhone zuru oke, kpochapụ data niile, ehichapụ faịlụ ehichapụ, ehichapụ data onwe, Mee ngwa ngwa iPhone, mpịakọta foto, ma ọ bụ mbupụ foto na kọmpụta.
Atụmatụ & Usoro
Etu esi kpochapu oku akuko na iPhone na ekwentị gam akporo
Etu esi ehichapụ ozi Facebook na iPhone, Android, ma ọ bụ Chrome
Etu esi ehichapụ ozi WhatsApp na iPhone & gam akporo
Etu esi ehichapu edokwubara na iPhone, gam akporo, na Chrome
Ndị Ahịa Na-amasịkwa
Iweghachite data iOS bụ #1 Data Recovery nke iOS Devices (iPhone, iPad, iPod) - Naghachi kọntaktị / Echefuola, SMS, Pi, Kpọọ & ọzọ.
Imeri Download Mac Download Imeri Download Mac Download Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
Ndabere iPhone / iPad Data na kọmputa ma weghachite data site na nkwado imechi ya na iOS Data ndabere & Weghachi.
Ezubere maka idozi ndị nwere nkwarụ, iPhone dị jụụ ma ọ bụ nke ihu abụọ. Wepu ọnọdụ mgbake, ọnọdụ DFU ma ọ bụ ihuenyo ọbara ọbara / ojii / ọcha / acha anụnụ anụnụ.
Ikike Ibe iPhone
Arụ Ọrụ gam akporo
Data Iweghachite Data Weghaara
Ihe na-ekpo ọkụ
Enwetaghị A Cheator
Lelee ndekọ ndekọ PC PCS
Uzo iPhone ebighị mkpọchi
Ndabere Kpọchiri Akpọchi iPhone
Copyright © 2014 - 2021 Best Mobile Utilities na Multimedia Ngwa .. Edebere ikike niile.
Anyị na-eji kuki iji hụ na ị nwetara ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị. Site n'iji saịtị anyị, ị kwenyere na nke anyị amụma nzuzo.Ọ dị mma, Nweta ya